Tsy voavaha: kinova Beta vaovao laharana 0.52 an'ny FPS malalaka sy misokatra | Avy amin'ny Linux
Tsy voavaha: kinova Beta vaovao laharana 0.52 an'ny FPS maimaimpoana sy misokatra
Linux Post Install | | fampiharana, About us
Androany dia miresaka an-tsaha isika Gamer amin'ny Linux hanohy hanitatra ny fampahalalana hita ao amin'ny katalaogin'ny lalao tsara sy mitombo, indrindra ny karazana FPS, fa afaka milalao ny an'ny Rafitra miasa malalaka sy malalaka, na ny hafa.
Androany dia manararaotra ny fandefasana ny vaovao Beta kinova 0.52 an'ny «Tsy vita vita» hahalala kely momba ny toetra an'io ary maro hafa.
FPS: Lalao shooter olona voalohany tsara indrindra ho an'ny Linux
Ho an'ireo izay mety tsy ho tia lalao video, indrindra ireo an'ny Karazana FPS (mpitifitra voalohany) na avy tsotra fotsiny fitifirana olona voalohany (amin'ny Espaniôla), moa ve ireo lalao video mifantoka amin'ny fampiasana basy avy amin'ny fomba fijerin'ny olona iray lohahevitra voalohany. Ireo lalao video ireo dia mizara toetra mitovy amin'izany amin'ny hafa tifitra lalao, noho izany, im-betsaka koa izy ireo no dinihina lalao hetsika.
Ho an'ireo izay, raha tia lalao video izy ireo, indrindra ireo an'ireo karazana FPS, mamela anao izahay lahatsoratra teo aloha mifandraika, mba hahafahan'izy ireo mandinika azy io raha ilaina izany.
Urban Terror: lalao Shooter First Person Shooter (FPS) tena tsara ho an'ny Linux
Rexuiz, Trepidaton ary Smokin 'Guns: Lalao FPS 3 bebe kokoa ho an'ny GNU / Linux
Quake3: Ahoana ny fametrahana sy fampiasana an'ity kilalao FPS kilasika ity amin'ny GNU / Linux?
Fahamarana: Ahoana no filalaovana Doom sy lalao FPS hafa mitovy amin'ny GZDoom?
1 Tsy vita vita: FPS maimaimpoana sy misokatra
1.1 Inona no Unvanquished?
1.3 Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
1.3.1 marary mitsika
1.3.2 Fametrahana sy fikirakirana
1.3.4 Sarin'ny sary
Tsy vita vita: FPS maimaimpoana sy misokatra
Inona no Unvanquished?
Araka ny voalaza ao amin'ny fizarana About ny tranokala ofisialin'ny «Unvanquished», voalaza toy izao manaraka izao:
"Unvanquished dia lalao stratejika olona maimaimpoana maimaimpoana ary mamoaka miaramila olombelona mandroso amin'ny teknolojia manoloana ny andian'olona vahiny azo ovaina. Aiza ny mpilalao afaka misafidy ekipa roa, izay zavatra iainana tsy mitovy tanteraka amin'ny andaniny sy ny ankilany, satria mifantoka amin'ny herin'aratra lavitra ny olombelona, ​​fa ny vahiny kosa miantehitra amin'ny hetsika sy hetsika haingana."
Ho fanampin'izay, nanampy izy ireo fa:
"Ny tanjon'ny lalao tsirairay dia mifantoka amin'ny fanapotehana ny tobin'ny fahavalo, manakana ny fisehoan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpanohitra. Ny fisondrotana ho an'ny ekipa roa tonta dia azo amin'ny alàlan'ny fanatontosana ny fahombiazan'ny tsirairay sy ny fanaraha-maso ny sarintanin'ny ekipa, ny fanokafana ny fidirana amin'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa ho an'ny olombelona, ​​sy ireo endrika lehibe kokoa ho an'ny vahiny."
Ary farany, zava-dehibe ny manamarika fa raha ny filazan'ireo mpamolavola azy:
"Unvanquished dia fork an'ny Tremulous, ampandehanin'ny motera Daemon. Ny motera Daemon izay manome hery ny lalao ataontsika dia mifototra amin'ny Quake 3, miaraka amin'ireo endri-javatra avy amin'ny ET: XreaL, ary koa ny ezaka fanaovana kaody manokana. Manoratra ny moterantsika ao amin'ny C ++ izahay izao mba hikolokoloana maharitra kokoa."
Anisany endri-javatra lehibe miavaka ity manaraka ity:
Loharano maimaimpoana sy malalaka io, ary koa sehatra hafa (Windows, Mac OS, ary Linux).
Izy io dia manana mpandika teny OpenGL maoderina 3 mifanentana.
Izy io dia mampiditra effets spécial, ao anatin'izany: mamony, manazava ny molotra, manjelanjelatra, manjavozavo ny hafanana, ary ny lokon'ny loko.
Izy io dia manana sehatr'asa libRocket maoderina izay mifanaraka amin'ny fenitra HTML4 / CSS2.
Manolotra ny fanohanan'ny Client VM teratany ho an'ny lojika lalao.
Mampiasà maodely IQM sy MD5 miaraka amina taolam-paty sy fifangaroan'ny sary mihetsika.
Ampiasao ny minimap 2D sy ny rafitra fanilo amin'ny fotoana tena izy.
Manome fanampiana ho an'ny sarintany mahazatra, specular, glow ary glow.
Mampiasa Bots mifototra amin'ny Navmesh, izay mampiasa hazo fihetsika.
Mampiditra ny fanampiana eo an-toerana miaraka amin'ireo fandikan-teny novokarin'ny fiaraha-monina efa misy.
Amin'ny teny anglisy ihany izy io izao.
Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
Araka ny voalaza ao amin'ny a famoahana vao haingana ny bilaoginy ofisialy, ny beta vaovao 0.52. Ary azo sintonina avy amin'ny anao io fizarana fampidinana ary apetraka ary ampiasaina amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza ao amin'ny anao Tranokala ofisialin'ny GitHub.
Raha misy fisintomana, ny fonosana Zip manerantany, tsy mila mamaha azy fotsiny ianao ary amin'ny terminal (console) dia manaova ireto baiko manaraka ireto:
Fametrahana sy fikirakirana
Ity baiko voalohany ity dia manome baiko voalohany, mba hanondroana ny fampirimana pkg.
Ity baiko manaraka ity ihany isaky ny te hilalao ianao:
Manantena aho fa tianao sy ankafizinao ity lalao FPS ity izay eo am-pivoarana tanteraka!
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Unvanquished», izay mpitifitra tetikady ho an'ny olona voalohany izay namoaka ny kinova beta farany 0.52, ary mbola afaka milalao, maimaim-poana misintona, maimaim-poana mandika, afaka mizara, afaka mianatra, afaka manova, afaka manome maimaimpoana; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Amin'izao fotoana izao, raha tianao izany publicación, Aza mijanona zarao izany miaraka amin'ny hafa, amin'ny tranokala tianao, fantsona, vondrona na vondron'olona misy tambajotra sosialy na rafitra fandefasan-kafatra, Aleo malalaka, misokatra ary / na azo antoka kokoa toy ny telegrama, Signal, Mastodon na iray hafa an'ny Fediverse, tsara kokoa.
Ary tsarovy ny mitsidika ny pejin-tranontsika ao amin'ny «Avy amin'ny Linux» hizaha vaovao bebe kokoa, ary koa hanatevin-daharana ny fantsona ofisialin'i Telegram avy amin'ny FromLinux. Raha, raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny mitsidika an'izay Tranomboky amin'ny Internet como el OpenLibra y JedIT, hiditra sy hamaky boky nomerika (PDF) momba an'io lohahevitra io na olon-kafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tsy voavaha: kinova Beta vaovao laharana 0.52 an'ny FPS maimaimpoana sy misokatra
languagezero dia hoy izy:
hace 7 volana
Araka ny mahazatra dia aza lazaina amin'ny fiteny inona ary indrindra fa amin'ny Espaniola, sao mandatsaka atody sy sasany ianao.
Mamaly an'i lenguacero
Miarahaba anao, Fiteny Zero. Misaotra anao tamin'ny fanamarihanao sy ny fanamarihanao. Efa napetrako ilay fehezan-teny: "Amin'izao fotoana izao dia amin'ny teny anglisy ihany." Ao amin'ny fizarana fiasa.
Noobsaibot73 dia hoy izy:
hace Herinandro 3
Raha hanontany raha amin'ny teny espaniola izy io, dia heveriko fa tsy ilaina izany karazana fanehoan-kevitra izany, koa, raha tsy milaza izany manokana izy ireo, dia manana fahazarana mieritreritra aho fa tsy izany ary raha izany dia tsara ary raha tsy izany, Tsy diso aho… Hitanao ve ny fomba tsotra?
Mamaly an'i Noobsaibot73
Miarahaba, Noobsaibot73. Misaotra amin'ny fanehoan-kevitrao. Ary mikasika an'izany, dia mitovy ny heveriko. Ny tiako holazaina dia raha tsy miresaka fiteny izy ireo dia ataoko fa amin'ny teny anglisy ihany no tonga.
Wolfenstein - Blade of Agony: kinova vaovao 3.0 azo alaina amin'ny GZDoom
Winter CMS: Rafitra fitantanana votoaty vaovao misokatra sy maimaim-poana